Blackboad China, Black Chalkboard, Black Akwụkwọ ehichapụ akwụkwọ ahụaja, Onye na-emepụta magnetik Black Chalkboard
Guangzhou New Magnetics Technology Co.,Ltd [Guangdong,China] Ụdị ahịa:Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide Onye na-emepụta ihe:11% - 20% N'ezie:ISO9001, RoHS, Test Report Nkọwa:Nwa ojii, Black Chalkboard,Black ehichapụ akwụkwọ ahụaja,Magnetik Nwa Chaiki,Black Board,
Home > Ngwaahịa > Chalkboard agba > Black Chalkboard
Ngwaahịa nke Black Chalkboard , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Nwa ojii , Black Chalkboard suppliers / factory, wholesale high-quality products of Black ehichapụ akwụkwọ ahụaja R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Sticky Ji achọ Mma Siri Ike Emepe Magnets Stick On Blackboard
Nnukwu Dechọ Mma Igwe kpochapụ Igwe Ahia
Akwụkwọ Nnukwu Mgbakwunye Akwụkwọ Nkwupụta Akwụkwọ
Sticky Ji achọ Mma Siri Ike Emepe Magnets Stick On Blackboard Ihe nju edere magnetik Ihe.NBCKP-NM50 magket blackboard bụ ụdị chalkboard na-agbanwe agbanwe, mfe nha, gbagọrọ agbagọ, agbagọ agbagọ, ma ọ bụ nwee ike ịbugharị n'ime ihe ọ bụla. Vingchekwa ohere ma buru ibu n'ụzọ dị mfe. N'otu oge ahụ, ọ nwere...
Nnukwu Dechọ Mma Igwe kpochapụ Igwe Ahia Nnukwu ojii ji achọ mma ndọta akụrụngwa mpempe ihe Nke No.BCKP-NS50 dị ka ndọta magnetik nke Magnetik dị ọcha site na ịgwakọta ntụ ntụ na plastik (CPE wdg), ọ nwere ikike ikike ndọta dị mma, ihe ndọta pụrụ iru. Ihe NoBCKP-NS50 bụ Black Chalkboar d, wụnye ya site na ngbanye...
Akwụkwọ Nnukwu Mgbakwunye Akwụkwọ Nkwupụta Akwụkwọ Anyị nnukwu mgbidi kọntaktị akwụkwọ nyagide Starry, Item No.BCKP-NS50-PSA, bụ ụdị na-agbanwe whiteboard na nrapado. N'ihi nrapado siri ike, bọọdụ bọọdụ ahụ dị nfuli dị mfe ịwụnye ma ọ gaghị ada n'ụzọ dị mfe . Dịka kọbọd, ọ nwere nnukwu ihe ọpịpịa na nhichapụ...
China Black Chalkboard Ngwa
Black bụ agba siri ike. Ọ mara ezigbo mma ma maa mma. Enwere mmetụta dị njọ mgbe ị na-eji naanị ojii kama agba ndị ọzọ. Blacklọ ahịa ojii na-eme ka ndị mmadụ mara ihe dị omimi. May nwere ike ịchọpụta na ndị yi uwe ojii na-agbasi ike ma na-eme ihe ike ike karịa ndị na-eyi uwe ndị ọzọ nwere agba. Maka imeghe ụlọ ahịa nke ụlọ ojii, mmetụta maka onye ahịa bụ na ọ nwere olile anya ịchọta ihe kachasị amasị ya na "ụlọ ahịa ojii". Dị ka n’abali, anyị na-ele anya n’eluigwe mgbe abalị na-agba ọchịchịrị. Ya mere, oji di nma dika odi nma. Ọrụ nhicha ga - eme ka ihe onye nwe ya nweta echiche niile nke imepụta mgbidi site na eserese. Ọ bụghị naanị na Black Chalkboard s na-egbo mkpa ndị a, mana na-anabatakwa magnets n'ihi ihe ya, weta ohere ọzọ.
Black ehichapụ akwụkwọ ahụaja
Magnetik Nwa Chaiki
Nwa nnochi friji
Nwa ojii Black Chalkboard Black ehichapụ akwụkwọ ahụaja Magnetik Nwa Chaiki Black Board Agba ojii Nwa nnochi friji